Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > ရသဘဏ်တိုက် > စာအုပ်စင်
ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၏အတွင်းပိုင်းအမြင်များ	ကြာသပတေးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၀၄ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	“မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းနှင့် ပဋိပက္ခအသွင်ပြောင်းရေး သို့မဟုတ် ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေး အလားအလာများကို လမ်းကြောင်း ၁ နှင့်... ဇင်ဘာဘွေမှ မဟာဘီလူးများ	တနင်္လာနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၁၄ မိနစ်	အိမ်စိုးမေ	ဝီလ်ဘားစမစ် (Wilbur Smith) ရဲ့The Leopard Hunts in Darkness ကို ဆရာတက္ကသိုလ်နေဝင်းက ‘ဇင်ဘာဘွေ’ အမည်နဲ့ ဘာသာပြန်ထားပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကိုပဲ ဆရာအထောက်တော် လှအောင် .. တိုက်စားခြင်း	တနင်္လာနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၀၇ မိနစ်	ရှင်းသန့်	ဆေးလိပ်၊ စီးကရက်ကြောင့် အဆုတ်ရောဂါအပြင် ကင်ဆာရောဂါများနဲ့ လူအမြောက်အမြားဟာ နေ့စဉ် သေဆုံးနေကြရပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်မသောက်သော်လည်း အနီးအနားမှာ သောက်နေတဲ့ လူဆီက ... အချိန်နှင့် ချိန်စက်၍ ရသည့်မေတ္တာ (သို့မဟုတ်) သားပြန်လာရင် ပေးလိုက်ပါ	သောကြာနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၀၉ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၅ နာရီ ၂၇ မိနစ်	မောင်အောင်ထက်	ဘီအီးဒီ ဟုတ်လား။ ကျောင်းဆရာဆိုတာ ပညာတတ်ထဲတော့ အဆင်းရဲဆုံး အလုပ်ပဲကွ။ မင်းမို့လို့ စိတ်ကူးယဉ်တတ်ပလေ။ ပြီးတော့လည်း မြန်မာစာ ယူမလို့တဲ့၊ ကောင်းကွာ။ ရည်မှန်းချက်ကတော့ ... လီကွမ်ယု၏ စင်္ကာပူ	ကြာသပတေးနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၀၈ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၁၃ မိနစ်	မင်းဆွေသစ်	‘တတိယကမ္ဘာမှ ပထမကမ္ဘာသို’့ သည် စင်္ကာပူ၏ သမိုင်း၊ လီကွမ်ယု၏ အတ္ထုပတ္တိဟု ဆိုရမည်။ စင်္ကာပူအကြောင်း ရေးလျှင် လီကွမ်ယုအကြောင်း ပါရ၏။ စင်္ကာပူနှင့် လီကွမ်ယုက ... ရွေးကောက်ပွဲနှင့် နိုင်ငံရေး အသိအမြင်	ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၀၇ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၁၈ မိနစ်	နေဇင်လတ်	ရာစုနှစ်၏ ၅ ချိုး ၁ ချိုး ကြာမြင့်ချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော ရွေးကောက်ပွဲသည် ကမ်းလင့် ကြိုနေသည်။ မျိုးဆက်တခု အကွာအဝေးအတွင်း စမ်းတဝါးဝါးနှင့် မျက်မမြင်ပုဏ္ဍား ... « ရှေ့ဆုံးမျက်နှာသို့ ရှေ့တမျက်နှာသို့ 123 နောက်တမျက်နှာသို့ နောက်ဆုံးမျက်နှာသို့ »	စာမျက်နှာ 1 စုစုပေါင်း 3	ကြော်ငြာ
We have 36 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved